Ubunewunewu been-suite elunxwemeni: iAirCon kunye neShower eshushu - I-Airbnb
Ubunewunewu been-suite elunxwemeni: iAirCon kunye neShower eshushu
Olutsha olutsha, lwenzelwe ukonwaba ekhaya kunye nokuhlala kamnandi elwandle.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye ne-AirCon, igumbi lokuhlambela leen-suite + ishawari eshushu.
I-Terrace ijonge elunxwemeni nasekuphumeni kwelanga. I-Beach House yaseCambodia yayivuyiswa ukongeza la magumbi matsha ngo-2017.
Yonwabela ubomi belali yaseKhambodiya bokwenyani, phumla elunxwemeni kwaye uqubhe, wonwabele i-hammock enomthunzi wesundu, emva koko urhoxe kwintuthuzelo yakho kwindawo yokuhlala engaphambili elunxwemeni eM’pai Bay kuphela.
Igumbi + i-terrace yi-7m x 3m.
Ipholiswe ngokukhawuleza yi-air con, imigangatho epholileyo enethayile, i-terrace yamaplanga.
Umatrasi wobuthongo obunzulu zzz...
Umnini wendlu yaselwandle okanye umphathi uya kuvuya kakhulu ukukunceda ufumane iibheringi kwaye wenze izicwangciso!